जमिमका हत्यारा खोज्दै | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
जमिमका हत्यारा खोज्दै
Posted on फ्रेवुअरी 14, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
काठमाडौँ, २८ माघ : जमिम शाहका हत्याराको खोजीमा अन्ततः नेपाल प्रहरी भारततिर लागेको छ । हत्याराले राजधानी छाडेको आशंका गर्दै मुलुकका विभिन्न भागमा खोजतलास जारी राखेकै वेला प्रहरी भारततिर लागेको हो । प्रहरी अधिकारी ‘ओभर कन्पिmडेन्ट’ भएकोले कडा सुरक्षा रहेको लाजिम्पाट हुँदै हत्यारा उम्किएको रहस्य खुलेपछि प्रहरीले राजधानीसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा खोजीकार्य सुरु गरेको थियो । तर, भरत नेपाली नाम गरेका व्यक्तिले जमिमको स्पेसटाइम केबुलमा फोन गरेर हिन्दी भाषामा हत्याको जिम्मा लिएपछि प्रहरी भारततिर गएको प्रहरीको उच्च स्रोत बताउँछ । प्रहरी अधिकारीहरू भारतको लखनउ र मुम्बई गएका छन् । सोमबार जमिमको स्पेसटाइम केबुलमा फोन गरेर आफूलाई भरत नेपाली बताउनेले हत्याको जिम्मा लिएका थिए ।
उनले ‘जमिमको हमने मारदिया, भारतके खिलाफ खडा होनेका सजा यही होगा’ भनेका थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भरत नेपालीले छोटा राजनसँगको वर्षौंको सम्बन्ध छाडेर आफ्नै समूह खडा गरेका छन् । उनले भारतको मुम्बईमा बसेर संगठित अपराधका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्पेसटाइम केबुलमा फोन गर्नेले नै सोमबार एभिन्युज टेलिभिजनमा पनि फोन गरेर जमिम हत्याको जिम्मेवारी लिएको थियो । जमिम शाहका हत्याका मुख्य योजनाकारले राजधानी छाडिसकेको बताएको दुई दिनपछि प्रहरी हत्याराले पनि राजधानी छाडिसकेको निष्कर्षमा पुगेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार बिहीबार प्रहरीको अनुसन्धान टोली अभियुक्त भागेको स्थानतिर खोजतलासका लागि हिँडिसकेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार शाहको हत्या गर्ने दुईजनामध्ये एक नेपाली र एक भारतीय भएकाले नेपाल र भारतमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको हो । भारतीय नागरिकसँग नेपालको पनि नागरिकता भएको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ, तर प्रहरीले अहिलेसम्म यो कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । ‘अनुसन्धानका वेला टेलिफोनमा कुरा हुँदा घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति भारतको लखनउमा भएको खुलेको थियो,’ प्रहरी उच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यही भएर प्रहरी लखनउ गएको हो, त्यस्तै हत्याको जिम्मा लिने भरत नेपाली मुम्बईमा बस्ने गरेकाले पनि प्रहरी त्यता गएको हो ।’
प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न दुवैको हुलियासमेत तयार गरिसकेको छ । प्रहरीले हुलियासहित सबै क्षेत्रमा सोमबार नै शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्न सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । आक्रमणकारीको हुलिया कालो वर्ण, कपाल लामो भएको भारतीय मूलको जस्तो देखिने र मंगोलीयन अनुहार रहेको व्यक्ति छ । तीमध्ये एकजनाको तस्बिर पनि प्रहरीले भेट्टाएको स्रोत बताउँछ ।
तस्बिरवाला व्यक्तिको उचाइ करिब पाँच फुट पाँच इन्च, रहेको र उनी नेपाली र हिन्दी भाषा बोल्नुका साथै भारत र नेपालको नागरिकता भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले जमिमको हत्यामा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहको संलग्नता रहेको बताएको पाँच दिनपछि बिहीबार मात्र नेपाल प्रहरी अनुसन्धानका लागि भारत गएको छ । स्रोतका अनुसार भारतमा नेपाल प्रहरीका करिब १५ जनाजति प्रहरी अधिकारी पठाइएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौँका प्रमुख एसपी गणेश केसीले परिसरबाट भारतमा प्रहरी नपठाएको दाबी गरे । ‘परिसरबाट गएको छैन, अन्तबाट गएको भए मलाई केही थाहा भएन,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने ।
प्रहरीले जमिमका हत्यारा खोज्नका लागि नेपाल प्रहरीका देशभरका इकाइहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने अनुसन्धानकै लागि काठमाडौँबाटै खटिएको ठूलो प्रहरीको टोली परिचालित छ । ‘अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरीको टोलीले तीव्र रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,’ महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा हनुमानढोकाका प्रमुख एसएसपी रणबहादुर चन्दले भने, ‘तर अहिलेसम्म नयाँ केही भेटिएको छैन, हामी अभियुक्त छिट्टै पक्राउ गर्छौं ।’
जमिममाथि गोली प्रहार गरेलगत्तै आक्रमणकारीहरू सांगि्रलाको पछाडि रानीबारी, बालाजु, फुटुङ हुँदै नुवाकोट भएर उत्तरतिर भागेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि प्रहरीले भारततिर प्रहरी पठाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रहरी अनुसन्धानले अभियुक्तले उपत्यका छाडिसकेको देखाएपछि प्रहरी चिन्तितसमेत बनेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अभियुक्तहरू उपत्यकामा हुँदै नभएको निष्कर्ष निस्किएपछि बुधबार नेपालका विभिन्न शंकास्पद स्थानमा काठमाडौँबाट प्रहरी पठाइएको र बिहीबार भारत पठाइएको बताए । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तहरू उपत्यकाबाट बाहिरिन जुन बाटो प्रयोग गरेका थिए, जमिमको हत्यामा प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल पनि त्यही बाटोमा भटियो,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘उनीहरू बालाजु, फुटुङ हुँदै बाहिर गएको प्रस्ट भएको छ ।’
फुटुङबाट उत्तर हुँदै जाने हो भने सजिलै धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जान सकिने अवस्था छ । जमिमको हत्या भएको थाहा पाएपछि पनि ‘होइन होला’ भन्दै प्रहरी निष्त्रिmय बसेकाले हत्याराहरू मोटरसाइकल चढेर लाजिम्पाटबाट करिब १० किलोमिटर टाढा फुटुङ पुगेको पुष्टि भइसकेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक पक्राउ
जमिम हत्याको आशंकामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अपराह्न साढे ३ बजेतिर पक्राउ परेका उनी मनोज अब्बुलकर हुन् । काठमाडौँबाट जेट एयरबाट दिल्ली जान लागेका उनलाई प्रहरीले तयार पारेको हुलिया मिलेकोले सोधपुछका लागि नियन्त्रमा लिएको महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाका एसपी गणेश केसीले जानकारी दिए ।
« दुतावासद्धारा आयोजित छलफलमा कसले के वोलॆ श्रीमान्ले दिएका अनगिन्ती दुःख:-नायिका मौसमी मल्ल　»